Ibu ọnụ nke dị mma na nke na-adịghị mma (1-12)
Iwere Ụbọchị Izu Ike ka ụbọchị obi ụtọ (13, 14)
58 Ọ gwara m, sị: “Tie ezigbo mkpu. Emechila ọnụ. Mee ka olu gị dasie ụda ike dị ka opi. Gwa ndị m otú ha si nupụ isi,+Gwakwa ezinụlọ Jekọb mmehie ha. 2 Ha na-achọ ka m na-eduzi ha kwa ụbọchị. Ha na-ekwukwa na ịmara ụzọ m dị ha mma,Ka à ga-asị na ha bụ mba nke na-eme ezi omume,Nke na-ahapụghịkwa iwu Chineke ha.+ Ha na-arịọ m ka m kpeere ha ikpe ziri ezi,Ka à ga-asị na ịbịaru Chineke nso dị ha mma.+ 3 Ma ugbu a, unu na-asị: ‘Gịnị mere na ị hụghị anyị mgbe anyị na-ebu ọnụ?+ Gịnịkwa mere na ị maghị mgbe anyị na-emekpa onwe* anyị ahụ́?’+ Ihe m ga-aza unu bụ, ọ bụ maka na unu na-achụ ihe ga-abara naanị onwe unu uru n’ụbọchị unu na-ebu ọnụ. Unu na-emegbukwa ndị na-arụrụ unu ọrụ.+ 4 Ọnụ unu na-ebu na-akpata esemokwu na ọgụ,Unu na-akụkwa ọkpọ ka ndị obi fere azụ. Ọ bụrụ na unu ana-ebu ọnụ otú a unu na-ebu taa, a gaghị anụ olu unu n’eluigwe. 5 Ụbọchị unu na-ebu ọnụ dị ka ụbọchị mmadụ na-emekpa onwe* ya ahụ́,Ụbọchị mmadụ na-ehulata isi ya dị ka ahịhịa amị,Gbasaa ákwà iru uju, kposaakwa ntụ ka o dinara na ya. Ọ̀ bụ otú a ka m chọrọ ka unu si na-ebu ọnụ? Ọ̀ bụ ụdị ibu ọnụ a na ụdị ụbọchị a ka unu na-asị dị Jehova mma? 6 Mbanụ. Ụdị ibu ọnụ m chọrọ bụ: Ka unu tọpụ agbụ e ji obi ọjọọ kee,Ka unu tọpụ eriri e ji kegide osisi yok,+Ka unu hapụ ndị a na-echi ọnụ n’ala ka ha nwere onwe ha,+Nakwa ka unu gbajie osisi yok niile. 7 M chọkwara ka unu nye ndị agụụ na-agụ ihe oriri,+Ka unu kpọbatakwa ndị ogbenye na ndị na-enweghị ebe ha ga-ebi n’ụlọ unu. Ọ bụrụ na unu ahụ ndị na-enweghị uwe, m chọrọ ka unu yiwe ha uwe,+Ka unu gharakwa ịgbakụta ndị ikwu unu azụ. 8 Ọ bụrụ na unu ana-eme ihe ndị a, ìhè unu ga-enwu ka chi ọbụbọ.+ Unu ga-agbakekwa ngwa ngwa. Ezi omume unu ga-ebutere unu ụzọ,Ebube Jehova ana-echebekwa unu n’azụ.+ 9 Unu ga-akpọku Jehova, ọ ga-azakwa unu. Unu ga-arịọ ya ka o nyere unu aka. Ọ ga-asịkwa, ‘M ga-enyere unu aka.’ Ọ bụrụ na unu ewepụ osisi yok e ji echi ndị mmadụ ọnụ n’ala,Kwụsịkwa ịtụ ndị ọzọ aka* na ịgwa ha okwu ọjọọ,+ 10 Ọ bụrụkwa na unu enye ndị agụụ na-agụ ihe na-amasị unu,*+Nyejuokwa ndị* nọ n’ahụhụ afọ,Ìhè unu ga na-enwudị n’ọchịchịrị. Itiri ga-adịkwara unu ka etiti ehihie.+ 11 Jehova ga na-edu unu mgbe niile,Na-egbokwara unu* mkpa unu n’ala kpọrọ nkụ.+ Ọ ga-emekwa ka unu sie ike.* Unu ga-adị ka ubi nke mmiri na-ede nke ọma.+ Unu ga-adịkwa ka isi mmiri nke mmiri ya na-anaghị ata ata. 12 Ọ bụ maka unu ka a ga-eji arụghachi ebe ndị e bibiri ebibi n’oge ochie.+ Unu ga-atọghachikwa ntọala ndị e mebiri n’oge ochie.+ A ga-akpọkwa unu ndị na-arụzi ebe e tidara etida ná mgbidi+Na ndị na-arụzi okporo ụzọ ka ndị mmadụ rụọ ụlọ n’akụkụ ya. 13 Ọ bụrụ na unu ejiri maka Ụbọchị Izu Ike kwụsị* ime ihe masịrị unu* n’ụbọchị m nke dị nsọ,+Ọ bụrụkwa na unu ewere Ụbọchị Izu Ike ka ụbọchị na-eme unu ezigbo obi ụtọ, ụbọchị Jehova nke dị nsọ, nke unu kwesịrị iji kpọrọ ihe,+Ọ bụrụkwa na unu ejiri ya kpọrọ ihe kama imewe ihe na-amasị unu na ikwuwe ihe na-enweghị isi, 14 Mụnwa bụ́ Jehova ga-eme ka unu na-enwe ezigbo obi ụtọ,Meekwa ka unu na-achị n’ebe ndị dị elu n’ụwa.+ M ga-eme ka unu rie ihe si n’ihe Jekọb nna nna unu ketara.+ Ọ bụ Jehova ji ọnụ ya kwuo ihe a.”
^ O nwere ike ịbụ ịkwa ndị ọzọ emo ma ọ bụ ibo ha ebubo.
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi ndị.”
^ Na Hibru, “ọkpụkpụ unu dị ike.”
^ Na Hibru, “mee ka ụkwụ unu laghachi azụ.”
^ Ma ọ bụ “ihe na-atọ unu ụtọ.”